Mmepụta Sandbox a Development Environment maka Red okpu OpenShift ka Ike Kubernetes Ngwa Development | Site na Linux
Onye Mmepụta Sandbox bụ ebe mmepe maka Red okpu OpenShift iji mee ka Kubernetes mepee ngwa
Red okpu kpughere ụbọchị ole na ole gara aga nkwuputa nke Onye Mmepụta Sandbox maka Red Hat OpenShift, Gburugburu OpenShift nke mmepe mmepe nke ga-enye ndi otu ikike iji gosiputa ngwa ngwa ndi ozo nke Kubernetes.
Igbe sandbox nke OpenShift bụ ebe dịịrị onwe ya na ụyọkọ ụyọkọ Ejila usoro ihe eji arụ ọrụ ahazi ya, nke mere na a na-eme nkwadebe tupu ndị mmepe "abanye" gburugburu. Kama dị ka ebe a na-adọba ụgbọala, ọ na-etinye ya na ihe niile ha chọrọ.
Ndị mmepe nwere ike ịmalite ozugbo site na ijikọ ngwa Kubernetes site na iji otu akụrụngwa na ngwaọrụ ndị ga-arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi, na-enweghị mkpa ichegbu onwe ha banyere ngwaike mmepụta yana na enweghị ihe egwu nke imebi ihe ọ bụla onye ọ bụla nwere ike ịhụ.
Ọzọkwa, ebe ọ bụ na ihe niile bara uru, sandbox na-enye gị ohere ịchekwa steeti, kpoo ha, tinye ha maka oge ọzọ, wee weghachite ha dịka ịchọrọ. Ọbụna enwere ike ibibi ihe niile wee bido site na ncha mgbe ọ dị mkpa.
Mithun Dhar, onye osote onye isi na onye isi njikwa, Onye Mmepụta Ngwa na Mmemme na Red Hat kwuru "" Site na OpenShift sandbox na mmelite kachasị ọhụrụ na ngwaọrụ ndị nrụpụta anyị, anyị na - eme ihe iji mee ka ọ dịrị ndị mmepe mfe ị bido ịmalite ụlọ Kubernetes. " .
OpenShift Onye Mmepụta Sandbox na-eme ka ọ dị mfe ịmalite site na ngwa ọrụ arụpụtara ya, nke ezubere iji nye ebe dị nchebe maka ịmepụta ngwa na ọrụ ọhụrụ, na -emepụta akpa sitere na koodu isi ma ọ bụ faịlụ Docker, na ndị ọzọ.
Red Hat kwupụtakwara usoro mmelite ọhụrụ na ngwaọrụ ya. nke ahụ ga - ewusi mmepe nke OpenShift na Kubernetes. Imirikiti mmelite ngwa ọrụ ọhụụ a agbakwunyere na OpenShift ma ga-erite uru n'iji Sandbox ọhụrụ.
Onye nrụpụta Sandbox maka Red Hat OpenShift na-enye gburugburu OpenShift gburugburu ebe obibi na ụyọkọ multi-tenant ejirila nke ọma na usoro ngwa ọrụ mmepe. Ejikọtara akụrụngwa na akụrụngwa iji nye ọnọdụ dị nchebe maka ịmalite ma ọ bụ iwu ngwa ọhụụ, na-agbakwunye ọrụ ọhụrụ, ịmepụta akpa sitere na koodu isi ma ọ bụ Dockerfiles, na ndị ọzọ.
Ejikọtara ya na pọtụfoliyo nke ngwa ndị nrụpụta, ikike ọhụrụ ndị a na-enyere ndị mmepe aka ịzaghachi mkpa maka ịbawanye ngwa ngwa ma bulie Red Hat OpenShift dị ka ikpo okwu na-eduga maka iwulite, ibuga, na ijikwa.
Dịka ọmụmaatụ, ụdị ọhụrụ nke CodeReady WorkSpaces, CodeReady Studio, CodeReady Dependency Analytics, na CodeReady Containers bụ mmelite na CodeReady site na Red Hat, ngwa ọrụ mmepe maka igwe ojii-ụmụ amaala mmepe nke na-eji Kubernetes na akpa maka gburugburu mmepe. Ebe ọrụ na Studio nwere oge dị mfe ịbanye ma hazie njikọta sandbox iji mepụta ma nweta ngwa, yana ahụmịhe ndị ọrụ na-agbanwe agbanwe.
N'aka nke ọzọ, Omume GitHub maka OpenShift ugbu a na Buildah na Podman, nke bụ ndị njikwa akpa, iji kwado ntinye nke ihe oyiyi akpa maka itinye na OpenShift, tinyere Visual Studio Code Ngwaọrụ maka OpenShift nwere ike ịgbakwunye ụyọkọ nke OpenShift Streams maka Apache Kafka, ọrụ Kafka jisiri ike ma kwado ya nke na-enye ndị mmepe ohere itinye data gụgharia n'ime ngwa. .
Dhar kwuru, "Ọtụtụ ọrụ anyị na Red Hat OpenShift lekwasịrị anya na ịbawanye nrụpụta ndị nrụpụta ma mee ka ndị mmepe nwee ike iji ikike Kubernetes mee ihe n'ụzọ zuru oke."
Finalmente maka ndị nwere mmasị ịmatakwu banyere ya nke ndetu, ị nwere ike ịkpọtụrụ akwụkwọ mbụ ahụ site na ịga na-eso njikọ.
Banyere ndị nwere mmasị na ngwaọrụ ma ọ bụ nsụgharị ọhụrụ na ndị ọzọ, ha kwesịrị ịma na ha n'ozuzu ha na akaụntụ Red Hat na-enweghị ego na ndozi ndị nrụpụta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Onye Mmepụta Sandbox bụ ebe mmepe maka Red okpu OpenShift iji mee ka Kubernetes mepee ngwa
GNU Guix 1.3 na-abịa na ọtụtụ ndozi maka distro na njikwa ngwugwu